Waa maxay sababta Infographics ay u sameyso aalado Suuqeyn oo Weyn | Martech Zone
Waa maxay sababta Infographics-ka u Sameeyaan Qalab Suuq Weyn
Khamiista, Oktoobar 11, 2012 Khamiista, Oktoobar 11, 2012 Douglas Karr
Maaddaama qaab-dhismeedka loo yaqaan 'infographics' uu noqdo mid caan ah, waxay sidoo kale sawirayaan tan dhaleeceyn ah oo ku saabsan tayada iyo saxsanaanta. Waan jeclahay sawir-qaadista maxaa yeelay waxay bixiyaan muuqaal muuqaal ah oo sharraxaya macluumaadka. Haddii ay run tahay iyo in kale runta waa sheeko kale… iyo xog-baaris si liidata loo baaray waxay soo jiidan kartaa tan badan oo dhaleeceyn ah waxayna dhaawici kartaa sumcadda shirkadda riixeysa. Dhammaan waa cadaalad ku ah jacaylka iyo qoraallada. 🙂
Indhuhu waa ballaadhinta maskaxda in ka badan kala badhna dadku waa bartayaasha aragga. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, daabacayaasha iyo ganacsiyada ayaa ka faa'iideysan kara isbeddelka. Waxaa jira baahi loo qabo xogta si dhakhso leh loogu wareejin karo, isku xiran oo muuqaal ahaan xiiso leh.
Sawir gacmeedkan, Waa maxay sababta Infographics-ka u Sameeyaan Qalab Suuq Weyn ka yimid naqshadeeyayaasha 'Infographic' ee fadhigoodu yahay Boqortooyada Ingiriiska 'Neo Mammalian Studios', ayaa ku garaacaya dhammaan dhululubbooyinka saxda ah waxa ka dhigaya in sawir-qaadeyaasha ay shaqeeyaan… muuqaal muuqaal ah oo lagu faafiyo xogta, dalab koraya oo uga imanaya dhagaystayaashaada, iyo dhexdhexaad si fudud loo wadaagi karo! Waa sicir bararka suuqgeynta waxyaabaha. Waxbadan ka baro sida loo sameeyo ka faa'iideyso oo kobci macluumaadkaaga.
Tags: infographicsuuq geynta macluumaadkaMacluumaadka Suuqgeyntaistuudiyaha neo mammalia
Oktoobar 11, 2012 at 8:09 PM
Xogta lagu daray waxaa ku jira sawirro heer sare ah oo soo jiidan doona akhristayaasha gaar ahaan aniga. Adoo ku fooggan sawirada, waan fahmi karaa waxa infographic doonayo inuu muujiyo.
Oktoobar 12, 2012 at 2:23 AM
Waxay i xasuusisaa wax aan ka maqlay tafatiraha wargayska waqti dheer ka hor: Infographics-ka ayaa door weyn ka ciyaari doona suuqgeynta wargeysyada. Waxaa u soo baxday inay xitaa run tahay waxa loogu yeero warbaahinta cusub, sidoo kale.